ဆန်နီနေမင်း: Up-graduating for M.phil to Ph.D
Up-graduating for M.phil to Ph.D
ကိုယ့်ကျမ်းအတွက် အလုပ်များနေတာနဲ့ အများအတွက် ဖြေပေးနေတဲ့ အမေးအဖြေလေးတွေလည်း မလုပ်ဖြစ်။ အွန်လိုင်းလည်း မတက်ဖြစ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်ရတာ ဒီနေ့တော့ အောင်မြင်သွားခဲ့ပါပြီ။ မနက်(၁၀)ကနေ ညနေ (၃း၃၀)ထိ တက္ကသိုလ်မှာ Master of Philosophy (M.phil) ကနေ Doctor of Philosophy (Ph.D) ဖြစ်ဖို့အတွက် တက္ကသိုလ်ဆရာများနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ(Presentation)လုပ်ဖို့ စောင့်နေခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အရင် ဒေါက်တာကျမ်းအတွက် Presentation လုပ်တဲ့ကျောင်းသားက (၂)ဦးကရှိနေသေးတော့ အဲဒီနှစ်ဦးပြီးအောင်ကို အစာငတ်ခံပြီး နေခဲ့ရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့တော့ အစာငတ်ခံရကျိုးနဲ့ ကြိုးစားရကျိုး နပ်သွားပြီလို့ ပြောရမှာပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ M.phil ကျောင်းသားကနေ Ph.D ကျောင်းသား ဖြစ်သွားပြီမို့လေ။ ကိုယ်ရေးနေတဲ့ကျမ်းက A Comparative Study of the Buddhist Methods of Ordination in Sri Lanka and Myanmar မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ရဲ့ ရှင်ပြုရဟန်းခံပုံများနဲ့ ဗုဒ္ဓနည်းကျလေ့လာနည်းဆိုတော့ ဒီကျမ်းဟာ ရေးမယ်ဆို အများကြီး ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့ နည်းစနစ်တွေအပြင် မြန်မာ၊ သီရိလင်္ကာတို့ရဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေပါ ရေးရမှာမို့ပါ။
ခု ကျမ်းကို (၆)ခန်းရေးဖို့ ပြင်ဆင်ထားရာက (၁)ခန်းလည်းပြီးပြီ။ ရှေ့ရေးရမဲ့အချက်အလက်တွေလည်း စုထားပြီးပြီမို့ တက္ကသိုလ်ဆရာများက M.phil ကနေ Ph.D ကျောင်းသားအဖြစ် အသိမှတ်ပြုပေးလိုက်တာပါ။ Ph.D ကျောင်းသားက အနည်းဆုံး(၄)နှစ်နီးပါးတော့ ကျမ်းပြီးအောင် လုပ်ရဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သီရိလင်္ကာရှင်ပြုရဟန်းခံတွေက ကိုယ့်မသိတာများနေတာရယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက ရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲတွေကလည်း နည်းတာရယ်ကြောင့် တော်တော်လေးကို လေ့လာရပါမယ်။ ဆရာတွေနဲ့ ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော့ မြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာတို့ရဲ့ ရှင်ပြုရဟန်းခံပုံတွေကို ဗွီဒီယိုရိုက်ယူထားပါ။ ပြီးရင် မတူကွဲပြားတာတွေကို တင်ပြပေးပါလို့ ဆရာများကတော့ အကြံပေးပါတယ်။ အဲဒီတော့ သီရိလင်္ကာနဲ့မြန်မာပြည်ကို လှည့်ပတ်ပြီး ရှင်ပြုပုံ၊ ရဟန်းခံပုံတွေကို လေ့လာရပါဦးမယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယခုလောလောဆယ် အနားယူတဲ့အနေနဲ့ စိတ်လည်းနည်းနည်းအေးသွားပြီမို့ ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် အမေးအဖြေများကို တက်နိုင်သမျှ ဖြေဆိုတင်ပေးသွားပါမယ်။
ဦးဇင်း Presentation လုပ်တာ အချိန်အားဖြင့်တော့ နာရီဝက်ကျော်လောက်ပဲ ကြာလိုက်ပါတယ်။ ဆရာများက သိချင်တာမေးတာနဲ့ ကိုယ်သိတာနဲ့ဖြေပေးတာနဲ့ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာများရဲ့ သီရိလင်္ကာနဲ့မြန်မာတို့ရဲ့ ရှင်ပြုရဟန်းခံပုံ မတူကွဲပြားတာတွေကို မေးတဲ့အတွက် ဦးဇင်းဖြေခဲ့တာလေးတွေကို စာဖတ်သူများလည်း ဗဟုသုတရအောင် အနည်းအကျဉ်းပြန်လည် ကောက်နုတ်ပြီး ရေးသားတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) Most of novices probably hold the higher ordain after 20 years old according to Myanmar tradition, while Sri Lanka tradition emphasizes thataperson can hold the higher ordination when they want to be that after 20 years.
(2) In Sri Lanka there is least of higher ordination– it is only one time inayear for each Nikāya. But, Myanmar holds the celebration of higher ordination as they like anywhere (Sīmā).
(3) Sri Lankan tradition said that there have to set an entrance examination for higher ordination, belonging to Rāmanya Nikāya and Amarapūra Nikāya. According to Myanmar tradition, there is no need to set exam for higher ordination.
(4) Ifanovice, who had problem with the chief monk or Dāyakā comes to other Nikāya temples. He may not get the Upasampadā in that temple. But, if the attitude of the novice is good the chief monk of the temple may consider the higher ordination of that for novice. Nevertheless, the chief monk of temple in Myanmar consider for the higher ordination even that particular novice is good or not.
(5) In Sri Lanka, it is necessaryapermission of higher ordination from Nikāya. But there is not permission from Nikāya in Myanmar.
(6) Sri Lanka tradition said that beforeamonk ordain, he must to change to lay-life – without changing it is not capable to ordain. But, the different is that in Myanmaranovice, changed, or not, can attain the higher ordination.
(7) While Sri Lanka higher ordination is celebrated by gathering many novices who are ready for higher ordination and already allowed by their teachers and higher Saṅgha, in accordance with Myanmar Tradition, there is only one novice in the most of celebration of ordination.
(8) In Myanmar, most of people, married or not, often attain the higher ordination forafew days - anything up to month, thought often far less, while there is probably not any temporary ordination in Sri Lanka.
(9) Myanmar tradition has that if candidate Samanera(novice) or Bhikkhu(monk) he will have Shin-Dagar (male supporter ofaSamanera) and Shin-Dagarma (female supporter ofaSamanera) like that his family or other family. If other family manages for Pabbajja or Upasampada they usually support the essential needs of that Samanera or Bhikku for life, while some pious devotees regard that Samanera or Bhikkhu as their very own son, looking after his needs and even portioning him among their children to heir heirloom. Regardless of whether one is related or not, they ordain the one to whom they are devoted in their heart. But, I didn’t find in Sri Lanka. Is it correct or not? No, Sri Lanka hasafew people. This is director answer.
(10) One thing for sure, last but not least, is that the celebration of higher ordination in Myanmar is easier than Sri Lanka and other countries.
ဒီအချက်တွေကတော့ အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာတို့ရဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေပါ။ ဦးဇင်း တက်နိုင်သမျှ မေးဖြေလုပ်ခဲ့တာတွေကို အကျဉ်းချုပ် ရေးသားပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒီထဲက နံပါတ်(၉)မှာ မြန်မာပြည်က ဒကာ၊ ဒကာမတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဦးဇင်းကို သူတို့ရဲ့သားတစ်ယောက်လို သဘောထားကြတယ်။ တချို့ဆို အမွေးစား အမွေးခံမျိုး သဘောထားကြတယ်လို့ ဆရာတွေကို ကြွားခဲ့ပါတယ်။ ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်တော့ မကြုံဖူးပါဘူး။ ဦးဇင်းသူငယ်ချင်းတွေမှာ အဲဒီလိုမျိုး ဒကာ၊ ဒကာမတွေရှိတာကို မြင်ဖူးကြားဖူးလို့ ကြွားခဲ့တာပါ။ ဦးဇင်းက ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးဘဲနဲ့ ပြောခဲ့ရတာလဲလို့မေးရင် ကိုယ့်နိုင်ငံက ဒကာ၊ ဒကာမတွေ ဘယ်လောက်ထိ စေတနာသဒ္ဓါတရားကောင်းတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်လို့ ပြောပြခဲ့တာပါ။ တချို့ ဒကာ၊ ဒကာမတွေရှိကြတာမို့ ဦးဇင်းလည်း လိမ်လည်တာမျိုးတော့ မဖြစ်လောက်ဘူး ထင်ပါတယ်လေ။
ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိသတ်များ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကာ လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်........။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 6:19 PM